Fibahanana Ny Fidirana Media Sosialy Tao Oganda Mialohan’ny Fanokanana ny Filoha Museveni · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jona 2016 6:59 GMT
Taorian'ny fifidianana tamin'ny 18 Febroary 2016 izay nahalany ny Filoha Yoweri Museveni tamin'ny vato maherin'ny 60%, tonga ny fotoana izay hanaovany fianianana mikasika ny fepotoam-piasàny fanindimy nieraka resabe. Mialohan'ny fety fankalazana ny 12 May, namoaka didy fibahanana ny fidirana amin'ny media sosialy manerana ny firenena ny Kaomisionan'ny Serasera ao Oganda.
Zavatr efa fahita io ho an'ireo Ogande, izay efa niaina ny fanerena fanakatonana media sosialy nandritra ny efatra andro nisian'ny fifidianana tamin'ny volana Febroary, ka nahazoan'ny mpitarika mpanohitra ny vato 35%. Manamafy ny mpanohitra ara-politika fa nisy hosoka ny fifidianana, notsikerain'ireo mpanaramaso iraisam-pirenena sy ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona ihany koa ny fizotry ny fifidianana.
Nofonjaina any amin'ny toerana voaara-maso akaiky i Besigye sy ireo endrika mpanohitra hafa fanta-daza, andro maromaro hatramin'ny volana Febroary, ary niantehitra tamin'ny media sosialy mba hikarakara izay antsoin'izy ireo hoe “fanentanana fihantsiana” ireo hetsi-panoherana. Ny hany vitan'i Besigye dia fametrahana fanamby araka ny lalàna manohitra ireo valim-pifidianana, niaraka tamin'ny fanampian'i Amama Mbabazi, Praiminisitra teo aloha.
Namoaka didy ny fitsarana fa i Museveni izay efa teo amin'ny fitondrana hatramin'ny taona 1986 no voafidy ara-dalàna, ary ny 12 May no nofidiana hanaovany ny fianianana. Nandritra ny fikarakarana, nosakanana avokoa ireo lalambe rehetra ary naparitaka be nanerana an'i Kampala renivohitra ireo miaramila. Efa nofonjaina indray i Besigye noho izy nikasa hiditra tao an-tanàna mba hotokanan'ny antokony taminà lanonana irey nifanindran-dàlana tamin'io
Tao anatin'ireo filazàna ho an'ireo mpanjifany , nanamafy ny fanakatonana azy ireo serasera lehibe ao amin'ny firenena, toy ny Airtel Uganda sy ny MTN Uganda.
Tamin'ny herinandro lasa teo, ny minisi-panjakana misahana ny fampahalalam-baovao sy ny torolalana nasionaly dia nandràra ireo tranon'ny media tsy hanao fandrakofana ireo hetsi-panoherana, ary ny lehiben'ireo Kaomisionan'ny Serasera ao Oganda efa nampitandrina fa ny sakana “dia mety hihanaka hatrany amin'ireo media sosialy.”
Nandritra ny fanakatonana tamin'ny volana Febroary, mbola afaka niditra tamin'ny media sosialy ireo mpampiasa tamin'ny alalan'ny fampiasana ireo tambajotra virtoaly tsy miankina (VPNs). Tamin'ny fanantenana ny tsy hiverenan'io tranga io, nitatitra ny Jajja, tambajotra Ogande miresaka momba ny teknolojia, ireo vaovao Oganda Tech , niankna taminà tatitra tsy voamarina, fa ireo mpanome tolotra Aterineto (ISP) “dia nangatahana mihitsy aza tsy hibahana fotsiny ny media sosialy sy ny fikirakiràna vola amin'ny finday fa ny Aterineto amin'ny ankapobeny raha sanatia mitranga izay ratsy indrindra”.
Namporisihan'ireo mpiray tanindrazana aminy ireo Ogande hafa mba hitroka VPNs amin'izao fotoana izao, na dia toa mbola mandeha ihany aza ny aterineto. Nibitsika i Trevor Mugabi, mpiasam-barotra nomerika, fa: